Karazam-borona | Tantsaha anaty aterneto | November 2019
Misafidy ny karazan-tsarimihetsika sinoa tsara indrindra
Tsy dia fahita firy ny tsiro sinoa any amin'ny zaridainanay. Na izany aza, izy io dia manohitra ny hafanana, mitondra voankazo haingana kokoa noho ny hafa ary manome vokatra avo lenta. Ny karazan-tsakafo rehetra dia tena niavaka, ary asehontsika amin'ny sainao ny lisitr'ireo karazam-bozaka malaza indrindra. Alenushka Arovana Alenushka dia azon'izy ireo amin'ny fiampitana ireo karazana Red Ball sy Girl Chinin.
Karazana kofehy ho an'ny zaridaina
Azonao atao ny miresaka tsy misy farany momba ny tombontsoa avy amin'ny fimamoana: afaka manatsara ny tsiambaratelo marefo izy, misy fiantraikany amin'ny tosidra, azo ampiasaina amin'ny maha-mandoza azy, ary amin'ny endriky ny printsy - hanesorana kolololola. Tsy misy fiafarana afa-tsy azonao atao ny miresaka momba ny karazana plough. Na izany aza, androany dia hiezaka ny hifantoka fotsiny amin'ireo karazana malaza indrindra isika.
Pehal Plum: famaritana sy toro-hevitra ho an'ny fambolena
Ny poa poa dia hazo, ny fambolena azy dia tsy mitondra olana fotsiny, fa koa ny fahafinaretana handinihana ny fijinjana. Mamboly ny voankazo amin'ny volana aogositra, maitso ny habe, ny henan'alika dia mamy ary mamy. Ny karazana volombava maniry dia tsy natao fotsiny ho an'ny fanjifana, fa koa ho an'ny fananganana fiarovana isan-karazany.
Fantaro ireo karazam-bozaka malaza
Plum - dia iray amin'ireo hazo fihinam-boa mahazatra indrindra eto amin'ny firenentsika. Ny rendrarendra goavam-be iray namboarina sy ny tsiron'ny voankazo mahavariana dia nahatonga azy ho nalaza be. Noho ny ezaka nataon'ny mpamboly, ny plum dia nahazo marika maro samihafa izay manintona tsiro sy menaka miavaka.
Plum "Honey White": famaritana ny karazana sy ny fambolena agrotechnology
Ny karazana voankazo voaloham-bokatra "Honey White" dia miavaka amin'ny vokatra avo, voankazo goavam-be izay mamy mahafinaritra sy mamy. Ny karazany dia malaza amin'ny zaridaina maro lavitra any ivelan'ny firenena. Andeha hodinihintsika ny fepetra fototra amin'ity hazo ity mba hambolena sy hikarakarana. Ny fambolena ny karazany dia avy amin'ny mpahay siansa ao amin'ny sampan'i Donetsk ao amin'ny Institute of Horticulture UAAS, olom-boafidy avy any Ukraine Liliya Taranenko, izay 66 taona niasan'ny zokiny niasa 62 taona niasa tao amin'ny Nosin'ny Station Experimental Station Artyomovskaya.
Ny momba ny karazana kavina "Anna Shpet"
Plum "Anna Shpet" dia nanamarika ny firaketana an-tsokosoko teo amin'ireo zaridaina an-jaridaina momba ny fambolena. Isan-taona dia omen'ireo mpamboly matsiro, matsiro sy mamy, izay ampiasaina amin'ny fahombiazana lehibe amin'ny famokarana sakafo isan-karazany, fiomanana amin'ny ririnina na ho sakafo mahaleo tena. Tantaran'ny fambolena Ny karazana homamiadana "Anna Shpet" namboarina voalohany tamin'ny taonjato faha XIX, tamin'ny taona 1870.
Ao amin'ny zaridaina tsara dia misy karazana plough matetika. Ary tsy mahagaga izany, satria ny olona dia naniry io voankazo io nandritra ny zato taona mahery. Nandritra io fotoana io dia nihoatra ny roanjato karazana voamadinika no niseho. Ary tsy ny toerana farany amin'ity andian-tantara ity dia ny plum Mirabel. Ny famintinana botanika Mirabel dia karazana varim-pamokarana izay mitombo ao amin'ireo hazo midadasika, izay manana fotony amin'ny endriky ny tsorakazo sy sodina matevina eo amin'ny vatan-kazo sy sampana.
Ny tena manan-danja indrindra momba ny karazan-tsahona "Filoha"
Zavamaniry mahafinaritra sy lonaka - ilay nofinofy isam-bolana. Noho izany, ireo hazo mba hambolena ao amin'ny tranokala dia tsy maintsy samborina amim-pitandremana, ka tsy misy zavatra tsy ampoizina hafakely. Androany dia hiresaka momba ny fimailo isika, karazana antsoina hoe "Filoha". Inona no asehon'ny hazo, inona ireo toetra mampiavaka ny karazana fiononam-po amin'ny hafa, ary koa ny fomba sy ny fotoana sy ny fotoana hanamboarana hazo ary ny fomba hikarakarana io karazana io, dia hianatra amin'ity lahatsoratra ity ianao.
Ny tena manan-danja indrindra mikasika ny karazan-tsakafo "Angelina"
Ao amin'ny saham-pamokarana ny latabatra toy ny karazana volombava be dia be. Plum dia karazana voankazo misy voankazo, nomena anarana maromaro, ary isaky ny subgenus karazana varieties. Kanefa mba hifidianana hazo fihinam-boa, dia ampy hahafantarana ny toetra mampiavaka ny karazany. Noho izany, ao anatin'ity lahatsoratra ity dia heverintsika ny toetra mampiavaka ny "Angelina".
Ny tena manan-danja indrindra amin'ny fampiroboroboana ny plum "Pissardi"
Plum dia tsy hoe zavamaniry iray izay manana tsiro mahagaga ny vokatra ary fitaovana tsara indrindra ho an'ny fanamafisana ny ririnina amin'ny ririnina. Afaka manao asa fanamboarana ihany koa izy ary manompo amin'ny maha-singam-pamokarana tsara endrika azy. Indrindra raha lefom-pokonolona mena "Pissardi". Ity karazana ity dia manintona ny fifantohan'ny lokon'ny voninkazo sy ny ravina, izay hanome tsiro manokana ho an'ny saha, trano fonenana, zaridaina na savoka.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Karazam-borona